Warbixin: Heerka Waxbarashada Soomaalida Minnesota (4)
Xeel-dheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhalliilaay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida.
Khubarada iyo macalimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuullada sare aysan wada qalin jebin, inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horrayn isku diiwanagelisay iskuullada.
Haddaba waa sidee heerka waxbarsshada carruurta Soomaalida? Muxuu yahay xiririka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiririka waalidka iyo ilamaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalin-jebin la’aanta iyo iyo in dhalinyaradu faraha la galaan falal dambiyeedyo?
Waxaanu idiin soo gudbinaynaa warbixin afar qeyb ka kooban oo ku saabsan xaaladda waxbarashada carruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Warbixin: Waxbarashada Soomaalida Minnesota
Dhageyso warbixinta heerka waxbarashada Somalida MN
Warbixin: Waxbrashada Soomaalida Minnesota 3
Warbixin: Waxbarashada Soomaalida Minnesota 4